Deepin 20.1 inosvika yakavakirwa paDebian 10.6, kugadzirisa mune maapplication uye zvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Deepin 20.1 inosvika yakavakirwa paDebian 10.6, kugadzirisa mune maapplication uye nezvimwe
Iyo nyowani vhezheni yeakakurumbira Linux kugovera, "Deepin 20.1" yakatoburitswa kare uye mune iyi vhezheni itsva tinogona kuwana izvo iyo system base yakagadziridzwa kuDebian 10.6 pamwe neiyo inosimudza iyo inobvumidza iwe kuti usarudze neyipi vhezheni yeKernel iyo system ichaiswa (5.4 kana 5.8), pamwe nekusiyana kwezvikanganiso zvebug uye zvimwe.
Kune avo vasingazive Deepin, vanofanirwa kuziva kuti chii kugoverwa kwakavakirwa paDebian uko kwave kuve kwakakurumbira kuvonga kune yayo yega Deepin desktop nharaunda (DDE) nekutenderedza makumi mana evashandisi ekushandisa, kusanganisira iyo DMusic mimhanzi inoridza, iyo DMovie vhidhiyo inoridza, iyo DTalk mameseji system uye iyo Deepin software yekumisikidza uye yekumisikidza nzvimbo. Center.
1 Nhau huru dze Deepin 20.1
1.1 Tora Deepin 20.1
Nhau huru dze Deepin 20.1
Mune iyi vhezheni itsva, sezvataurwa, hwaro hwepakeji hwakawiriraniswa neDebian 10.6 pamwe neyekuisa iyo inokutendera kuti usarudze pakati pemaviri Linux kernels: 5.4 (LTS) kana 5.8.
Uyewo, tinogona kuona kuti optimizations yakaitwa mukugadziriswa kwekernel uye kodhi yekushandisa kunatsiridza kupindura kwechimiro uye kuwedzera mashandiro uye izvo kudzikiswa kwekutanga nguva yezvakawanda zvekushandisa zveDepin zvakawanikwa.
Pa desktop DDE, rutsigiro rwegirazi rekubata rakavandudzwa uye pa-screen chiratidzo chekudzivirira chakawedzerwa, mukuwedzera kune akagadziridzwa mapaneru mashandiro, iyo skrini saver interface, iyo widget yekumhan'arira pamusoro pehunhu hwe network, iyo interface yekutanga zvirongwa.
Iyo maneja wefaira yakavakira-mukati mutsigiro yekuzara-zvinyorwa kutsvaga nefaira zvemukati, yakawedzera yekutarisa mifananidzo yeDVDVU, yakaderedzwa zviwanikwa, uye zvakare yakawedzera rutsigiro rwekupinhwa manotsi kumusoro kwerondedzero mune yezwi memo system.
Zvakare zvasimbiswa kuti muDepin 20.1 unogona kufambisa manotsi pakati pezvikamu, shandura marongero ezvinyorwa, ita mashandiro ematch nemanotsi akati wandei, dudzira zvinyorwa zvemavara, chinja sosi yezwi. Kutaura kutaura synthesizer uye kutaura kwekuziva injini optimization yakaitwa.
Panzvimbo peFirefox, Thunderbird, GParted, uye Cheese, iyo yaimbove yakabatanidzwa mukutakura, Iye zvino Deepin 20.1 inopa yayo bhurawuza, mail mutengi, chikamu mupepeti uye chirongwa chekamera, chinongedzo uye nzira dzekudyidzana kwevashandisi mavari vakabatana neese mamwe ekushandisa ekuparadzira. Uye zvakare, pane zvitsva zvinoshandiswa Runhare Mubatsiri, Scan Mubatsiri uye Downloader yakagadzirirwa Deepin, iyo inogona kuiswa kuburikidza neApplication Kuisa Center.
Mune emulator terminal, rutsigiro rwakawedzerwa rwekugadzira windows uye nzvimbo dzekushandira kuburikidza ne-on-screen gestures, 10 yakavakirwa-mukati maratidziro, akawedzera tabo musoro wemafomati marongero, akaisa rutsigiro rwekuchinja saizi yefonti nekutenderera vhiri regumbo uchinge wakabata pasi kiyi yeCtrl
Iyo configurator inowedzera kugona kusarudza matatu emagetsi zvirongwa: zvine mwero, zvehupfumi, uye zvepamusoro-kuita.
Mune marongero eBluetooth, kuwedzera kune ekumisikidza zvishandiso, yakananga faira yekufambisa basa inopihwa.
Wakawedzera rutsigiro rwekubata skrini uye bata mapaneru ekudzora mu Image Viewer.
Gwaro rinoona rine yakazara screen mode uye rutsigiro rwemafaira eDVDVU.
Iyo yemavara edhitaina ikozvino ine ikholamu yekugadzirisa modhi, iko kugona kubatanidza mavara emavara, uye sarudzo yekuratidza nzvimbo nenzvimbo.
Mabhatani akawedzerwa kune maneja wefaira kuti ambomira uye atangezve kumanikidza uye kudzikisira maitiro.
Wakawedzera sarudzo yekudzima mafaera mushure mekugadzira kana kusunungura dura.
Wakawedzera rutsigiro rweZIP mafaera.
Iko kugona kwekubvisa mafaera kubva mudura uye kuwedzera mamwe mafaera kudura kwakaitwa.
Tora Deepin 20.1
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kugona kuisa iyi vhezheni vhezheni, vanofanirwa kuziva kuti saizi yeiyo bootable ISO mufananidzo iri 2,9 GB uye inogona kuwanikwa kubva ku inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Deepin 20.1 inosvika yakavakirwa paDebian 10.6, kugadzirisa mune maapplication uye nezvimwe
Deepin, iyo distro inogadzira kukakavara kwakanyanya.
Chinonyanya kundishamisa ndechekuti hapana mushandisi kana boka rakanyatsoongorora kugovera kuti vaone kuti rakachengeteka uye rakavanzika sei. Ini ndinofungidzira izvozvo nekuda kwezvikonzero zviri pachena zvebasa rakakura iro izvi zvaizoda mari.
Ndinogara naDebian, amai veDistros
Mapurojekiti egore nyowani uye zvirongwa zvinogona kukubatsira iwe kuzviita